नेकपा विवादको अन्त्य तत्काल नभए देशले नै मुल्य चुकाउनु पर्छ – Kendra Khabar
नेकपा विवादको अन्त्य तत्काल नभए देशले नै मुल्य चुकाउनु पर्छ
२०७७, २० श्रावण मंगलवार ०४:०९
महामन्त्री, नेकपा मशाल
नेकपा मशालका महामन्त्री मोहन विक्रम सिंहले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को विवाद नीति, सिद्धान्त र विधि अनुरुप तत्काल अन्त्य नगरिए त्यसको मूल्य मुलुकले चुकाउनुपर्ने बताएका छन् । हाल ठूला मानिएका दलहरु मध्ये तुलनात्मकरुपमा नेकपा नै देशभक्त र राष्ट्रवादी देखिएकाले यसको विवादले व्यवस्था प्रति नै खतरा आउन सक्ने तर्फ सचेत रहन उनले नेकपालाई आग्रह गरे । केन्द्र्र खवरसंगको अन्तरवार्तामा उनले वर्तमान सरकार ढाल्न देशीविदेशी शक्तिहरु लागेको भएपनि त्यो उनीहरुको कारण भन्दापनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कार्यशैलीले अप्ठ्यारो परेको विश्लेषण सुनाएका छन् । प्रश्तुत छ नेकपा मशालका महामन्त्री मोहनविक्रम सिंहसंगको कुराकानीको सम्पादित अंस ।
नेकपाको विवादलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
नेकपाको विवाद सैद्धान्तिक विवाद होइन । वर्तमान अवस्थामा देखिएका समस्याका विषयलाई लिएर पनि उक्त पार्टीमा कुनै विवाद देखिँदैन । यो नितान्त उनीहरुको आन्तरिक विवाद हो । तर, यो विवादले देशलाई नै अप्ठ्यारो पार्ने अवस्था देखिँदैछ । यो विवादको अन्त्य नेकपाले आफ्नो नीति, सिद्धान्त र विधि अन्तर्गत रहेर तत्काल टुंग्याउनु पर्दछ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले भारतीयको इसारामा आफ्नो राजिनामा मागिएको भन्नुभएको छ । अर्काे पक्ष सके दुबै नभए एउटा पदबाट राजिनामा दिनै पर्नेमा जोड दिएको छ । यस्तो अवस्थामा निकास कसरी निस्कला ?
भारतीय, विदेशी शक्ति भन्नुस् या अरु देशभित्रकै परिवर्तन विरोधी शक्ति भन्नुहोस्, उनीहरु यो सरकारको निरन्तरता चाहन्नन् । उनीहरु अनेक प्रकारले समस्या सिर्जना गर्न खोज्छन् । नेकपाको विवादमा पनि उनीहरु पक्कै खेल्न खोजेका छन् । यो सत्य कुरा हो । उनीहरु यसलाई भत्काएर नेपाललाई प्रतिगामी बाटोमा लैजाने प्रयत्नमा सधैं नै लागिरहन्छन् । तर, अहिले सरकारलाई अप्ठ्यारो परेको उनीहरुको कारणमात्र हो जस्तो मलाई लाग्दैन ।
‘यो सरकार प्रधानमन्त्रीको आफ्नै कार्यसैलीका कारण समस्यामा परेको हो । उहाँको स्वच्छाचारिता हावी भएको अन्य नेताले महसुस् गरे । उहाँको राजिनामा मागे । यसमा भारत या अरु देशलाई दोश देखाउन मिल्दैन ।’
यो सरकार प्रधानमन्त्रीको आफ्नै कार्यसैलीका कारण समस्यामा परेको हो । उहाँको स्वच्छाचारिता हावी भएको अन्य नेताले महसुस् गरे । उहाँको राजिनामा मागे । यसमा भारत या अरु देशलाई दोश देखाउन मिल्दैन । प्रधानमन्त्रीले राजिनामा दिनुपर्छ पर्दैन भन्ने कुरापनि उहाँकै पार्टीले निर्णय गर्ने हो । मैले पर्छ पर्दैन भन्दिन । उहाँको पार्टीको विधान छ । नीति र सिद्धान्त छ । सांगठनिक संरचनाहरु छन् । त्यहीँबाट उहाँहरुले निकास खोज्ने हो । अब प्रधानमन्त्रीबाट हट्नुप¥यो भने पार्टी छोड्ने फुट्ने कुरा गर्नुहुँदैन । उक्त पार्टीको विवाद अब पार्टीका दुई अध्यक्ष बसेर समाधान हुने विषय होइन । विधि र प्रक्रिया सबैले मान्नु पर्छ नेकपा फुट्न हुँदैन । निकास नै यही हो ।
नेकपाले सञ्चालन गरेको वर्तमान सरकारको कार्यसैलीले आफ्नो लोकप्रियता हटाएको छ या बढाएको छ ?
हामीले उक्त पार्टी(नेकपा)लाई कम्युनिष्ट पार्टी मानेका छैनौं । हिन्दु, बौद्ध, इस्लाम या अरु धर्म मान्नेहरुका समेत निस्चित मुल्य मान्यता हुन्छन् । विशेषताहरु हुन्छन् । उनीहरु(नेकपा)मा कम्युनिष्ट मुल्य मान्यताका आधारहरु नै छैनन् । उनीहरुको सिद्धान्त मात्र होइन संगठानात्मक कायैसैली र पद्धति पनि कम्युनिष्ट पद्धति भन्दा धेरै टाढा गइसके ।
हामीले कार्यसैलीका आधारमा बुर्जुवाहरुसंग पनि सहकार्य गरेका छौं । समर्थन गरेका छौं । वर्तमान सरकारले बर्जुवा पार्टीले गर्न सक्ने खालका सुधारात्मक काम समेत गर्न सकेको छैन । भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण गर्ने नीति लिएको छ । खुलेआम भष्टहरुलाई साथ दिएको देखिन्छ । जनताप्रति जवाफदेहिता देखिन्न ।
‘राष्ट्रियताका सवालमा, नागरिकताका सवालमा, तराईका राजनीतिक दल र समस्यका सवालमा यो सरकारका कदम सही छन् । त्यही कारणले हामीले समर्थन गरेका छौं । कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियधुरा लगायतका भूमि समेटिएको नक्सा सार्वजनिक भएको छ । यो इतिहासमै सबैभन्दा महत्वपूर्ण काम भएको छ । यस्तो काम अहिले शक्तिमा रहेका अन्य दलहरुबाट सम्भव छैन ।’
राष्ट्रियताका सवालमा, नागरिकताका सवालमा, तराईका राजनीतिक दल र समस्यका सवालमा यो सरकारका कदम सही छन् । त्यही कारणले हामीले समर्थन गरेका छौं । कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियधुरा लगायतका भूमि समेटिएको नक्सा सार्वजनिक भएको छ । यो इतिहासमै सबैभन्दा महत्वपूर्ण काम भएको छ । यस्तो काम अहिले शक्तिमा रहेका अन्य दलहरुबाट सम्भव छैन । तर, जनजिविकालाई सहज बनाउने । भ्रष्टाचार रोक्ने । माफियाहरुसंगको उठबस जस्ता विषयले वर्तमान सरकारको लोप्रियता हराएको सत्य हो । यसलाई सुधार्नुपर्छ । समग्रमा भन्ने हो भने अहिलेलाई यो सरकारको विकल्प छैन । विकल्प खोजिए प्रतिगामीहरु टाउको उठाउँछन् ।
तपाईले यो सरकारको विकल्प छैन । प्रतिगामीहरुले टाउको उठाउँछन् पनि भन्नुभयो । फेरी पार्टीको विधि र प्रक्रियालाई प्रधानमन्त्रीले मान्नुपर्छ पनि भन्नु भयो । राजिनामा दिनुपर्छ या दिनहुन्न, के भन्न खोज्नुभएको ?
हाम्रो प्रष्ट कुरा छ । वर्तमा सरकारको विकल्प छैन भनेको नेकपा सरकारको विकल्प छैन भनेको हो । प्रधानमन्त्री को बन्ने र कसलाई बनाउने भन्ने कुरा नितान्त नेकपाको आन्तरिक विषय हो । हामीले प्रधानमन्त्री ओलीले राजिनामा दिनुपर्छ पनि भनेका छैनौं । नेकपाले कार्यसैली सुधार्नुपर्छ भनेका छौं । प्रधानमन्त्रीको पदमा को बस्ने भन्ने कुरा उक्त पार्टीको आन्तरिक विधि र प्रक्रियाले टुंग्याउने विषय हो । केपी ओली या उहाँको ठाउँमा प्रचण्ड या माधव नेपाल वा अरु जोसुकै प्रधानमन्त्री बन्नुहुन्छ । त्यो उहाँको विषय हो । तर, विधि प्रक्रियालाई मान्दिन मैले भनेको भए हुन्छ नत्र पार्टी फुट्छ भन्न भएन ।
हामीले उक्त पार्टी (नेकपा) बलियो भएको हेर्न चाहन्छौं । विधि र प्रक्रियाले चलेको हेर्न चाहन्छौं । उक्त पार्टी बलियो हुँदा मात्र वर्तमान उपलब्धि जोगिन सक्छन् । नेकपा फुट्यो भने प्रतिगमनले टाउको उठाउँछ । परिवर्तन गुम्ने खतरा हुन्छ भनेका हौं । को प्रधानमन्त्री बन्ने या हट्ने कुराले महत्व राख्दैन । उक्त पार्टी एकतावद्ध रहन्छ रहन्न भन्ने कुरालले प्रभाव पार्छ । विवाद समाधान नगर्ने, विधि प्रद्धतिलाई नस्विकार्ने र पार्टीका कमिटीलाई निर्णय गर्न नदिने, त्यसलाई टार्दैजाने कुराले देशलाई नै बन्धक बनाउँछ । सरकारको नेतृत्वकर्ता र जनताले विश्वास गरेको शक्ति भएका हुनाले उक्त पार्टीको विवाद विधिमा टेकेर छिट्टै समाधान हुनुपर्छ ।
त्यस्तो विधि के हो ? नेकपाको विवाद समाधान होस् ।
उक्त पार्टीका दुई अध्यक्ष बसेर कुरा गरेर मात्र विवाद समाधान हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । दुई अध्यक्षले नै पाटी मिलाएको हो । एकता गरेको हो । उहाँहरुबाहेक अरुले हुन्न भनेको सुन्छौं । जव दुई अध्यक्ष नै मिल्नुहुन्न, तव विधिमा जानुपर्छ । अन्त्यहिन विवादले देशलाई नै घाटा पार्ने हो । व्यक्ति केन्द्रित भएर समस्या समाधान हुन्न । पार्टीका कमिटीहरुबाटै निकास निकाल्नुपर्छ । जव विवाद हुन्छ । दुई अध्यक्ष मिल्नु हुन्न । पार्टीका विधिलाई लत्याइन्छ अनि कहाँबाट निकास निस्कन्छ ? उक्त पार्टीको विवादको निरुपण भनेकै अब बहुमत र अल्पमतका आधारबाट मात्रै हुने मैले देखेको छ । यसो हुँदा म नभए पार्टी फुट्छ, फुटाउँछु कसैले भन्नु भएन । पार्टीको निर्णय मान्छु भन्नु प¥यो । निकास निकाल्न समस्या नहोला । देशलाई नै अप्ठ्यारोमा पार्न भएन नी । व्यक्तिलाई पार्टीले पठाउने हो । पार्टीलाई व्यक्तिले होइन ।
कुन सामग्री उपब्ध छैन